Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay daadad ku dhuftay waqooyi bari Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay daadad ku dhuftay waqooyi bari Mareykanka
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Duhurnimadii, ku dhawaad ​​20 dhimasho ayaa la xaqiijiyay, iyadoo dhowr dhimasho laga soo sheegay New York, New Jersey, Pennsylvania, iyo hal Maryland.
Woqooyi -bari Mareykanka waxaa ku fatahay daadad waaweyn.
Haraadiga duufaantii Ida ayaa jaray waddo dilaa ah oo dhex marta waqooyi bari Mareykanka.
Guddoomiyayaasha New York iyo New Jersey ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah.
Roobab mahiigaan ah ayaa ku dhuftay aagga metrooga magaalada New York habeenimadii Arbacada ilaa khamiistii, taas oo sababtay dhimasho fara badan, iyadoo haraadiga Hurricane Ida ay jartay waddo dilaa ah oo ku baahsan waqooyi -bari Mareykanka.
Guddoomiyaha New York Kathy Hochul ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyadoo haraadigii Ida uu sababay fatahaad weyn magaalada New York iyo qeybaha kale ee gobolka.
Guddoomiyaha New Jersey Phil Murphy ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isagoo ka jawaabaya Ida, sidii oo kale New York City Duqa magaalada Bill de Blasio goor hore oo habeenimo ah.
Tirada dhimashada ayaa kor u kacday maalintii Khamiista oo dhan iyadoo mas'uuliyiintu bilaabeen inay fahmaan baaxadda burburka. Duhurnimadii, ku dhawaad ​​20 dhimasho ayaa la xaqiijiyay, iyadoo dhowr dhimasho laga soo sheegay New York, New Jersey, Pennsylvania, iyo hal Maryland.
Saddex ka mid ah dhimashadu waxay ka dhaceen hal qoys New York City degmada Queens. Saddexda xubnood ee qoyska, oo uu ku jiro wiilka 2 jirka ah, ayaa ku qaraqmay xaafadda Flushing. Laba qof oo kale ayaa lagu dilay xaafadda Jamaica markii daadad ku soo dumay darbiga gurigooda.
Afar kale oo dhimasho ah ayaa ka dhacay dhisme dabaq ah oo ku yaal Elizabeth, New Jersey, AP ayaa werisay. Duqa magaalada Elizabeth ayaa horay u soo sheegay shan dhimasho oo ka dhacay dhismaha.
Aagga weyn ee Philadelphia, ugu yaraan saddex dhimasho ayaa saraakiisha ay xaqiijiyeen, oo ay ku jirto hal geerida haweeney uu ku dhacay geed ku soo dhacay Magaalada Upper Dublin.
Magaalada Rockville, Maryland, nin 19 jir ah ayaa ku dhintay daadad ka dhacay Rock Creek Woods Apartments oo ku yaal Twinbrook Parkway. Sida laga soo xigtay Fox5, ninku wuxuu isku dayayay inuu caawiyo hooyadiis markii la qaaday.
Waxa kale oo jiray dhimasho badan oo dad baabuurtu ku dhacday, oo ah masiibo naxdin leh oo sidoo kale sababtay dhimashada ugu yaraan hal darawal Passaic, New Jersey. Iyadoo ay daadadku ku soo qulqulayeen waddooyinka magaalada, 70-jir baabuurley ah ayaa qaaday kadib markii la badbaadiyay qoyskiisa.
Dhacdadan cimilo taariikhi ah ayaa sidoo kale kicisay Adeegga Cimilada Qaranka (NWS) New York xafiiskeeda si ay u soo saarto digniintii deg-degga ahayd ee fatahaadda markii ugu horreysay, maadaama mid loo soo saaray waqooyiga New Jersey ka dibna mid kale loo soo saaray qaybo ka mid ah Magaalada New York. Feejignaanta waxaa loo hayaa xaaladaha daadadka halista ku ah nolosha, waxaana loo adeegsadaa “xaalado aad u dhif ah marka roobab aad u daran ay u horseedaan khatar aad u daran nolosha aadanaha iyo burbur ba’an,” NWS ayaa tiri.